Inona ny fifandraisana eo amin'ny sosiolojia?
Fifandraisana sy fifandraisana amin'ny psychology - sehatra sy karazany
Ny fifandraisana dia singa ilaina amin'ny fananganana ny olona iray eo amin'ny fiarahamonina. Ny fifandraisana voalohany dia misy ao amin'ny fianakavian'ny ray aman-dreny, izay ahafahan'ny zaza mandray ny valin'ny tenany, ny fihetsiny amin'ny havana, mianatra mamaky fihetseham-po sy fihetseham-po - noho izany, ny rafitra dia natao ho an'ny fifandraisana mahomby na tsy mifanaraka amin'ny olona.
Inona ny fifandraisana?
George G. Mead - Amerikana sociologista sy filozofa nampiditra ny foto-kevitra fifandraisana tamin'ny taona 1960. Nino i Mead fa ny olona iray dia tokony hahatakatra ny iray hafa, zava-dehibe ny mahatakatra ny zavatra ataony, inona no zavatra ataony. Ny fifandraisana dia ny fifandraisana eo amin'ny olona, ​​anisan'izany ny fiantraikan'ny fifankatiavana mandritra ny fiaraha-miasa. Nandritra ny fifandraisana:
fifanakalozana traikefa, hevitra;
fanatanterahana ny fifankahazoana;
fananganana drafitra na tetikady tokana;
manolo-tena eo amin'ny toerana (anjara) an'ny mpiara-miasa (jereo ny toe-javatra amin'ny alalan'ny mason'ny hafa);
raha misy fifanoherana sy fifaninanana tsy mifanentana.
Fifandraisana amin'ny sosiolojia
Ny fifandraisana ara-tsosialy dia ny fifandraisana amin'ny olona, ​​tanterahina ao amin'ny micro (fianakaviana, namana, fiaraha-miasa) ary ny macro (rafitra sosialy amin'ny ankapobeny) ary ny fifanakalozana famantarana, traikefa ary traikefa azo tsapain-tanana. Ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana dia mifandray amin'ny olona ary mifototra amin'ny toetran'ny tsirairay amin'ny foto-kevitra tsirairay, ny fitondrantena, ny fifanoherana izay mitranga mandritra ny fifandraisana. Pitirim Sorokin (manam-pahaizana momba ny fiaraha-monina) dia nanondro teboka matanjaka marobe amin'ny fifandraisana ara-tsosialy:
Ho an'ny fifanakalozan-kevitra, farafaharatsiny 2 no ilaina.
Mandritra ny fifampiresahana, dia omena ny zava-drehetra ny fiheverana: fihetsika, fitenenana, fihetsiketsehana - manampy amin'ny fanatsarana ny hafa izany.
Ny hevitra, ny fihetseham-po, ny hevitra dia tokony hifanaraka amin'ny mpandray anjara rehetra amin'ny dingam-pifandraisana.
Fifandraisana amin'ny psychologie
Ny modely voalohany amin'ny fifandraisany amin'ny olona ho an'ny olona dia ny fianakaviana. Ao anatin 'ny faritry ny fianakaviana, ao anatin' ny toe-javatra ifanarahana miaraka amin 'ny firaisana dia lasa "izaho" ilay zaza. Ny toetra maha-olona dia mifototra amin'ny alàlan'ny fisainana amin'ny fahitan'ny hafa ny hafa sy ny fihetsiky ny fitondran-tena vokatry ny asany. Ny fifandraisana eo amin'ny psikolojia dia fotokevitra mifototra amin'ny fomba fijerin'i D.Mid sy ny teôlônany momba ny "fifankatiavana ara-panoharana" izay miseho avy amin'ny rafitry ny fitondrantena. Ny sociologista dia nanisy lanjany lehibe ny fifanakalozana famantarana (fihetsika, lohahevitra, endriky ny tarehy) eo amin'ny antoko mifandray.
Amin'ny fiaraha-mientana sosialy iombonana, ny olona dia mifamatotra amin'ny fifampiraharahana ary ny fifampiraharahana mahomby dia mitaky "lanja" lehibe amin'ny maha-olona azy. Tsy mahomby - ny lohahevitra rehetra ao anatin'ny dingan'ny fifandraisana dia voafaritra amin'ny tenany irery ary tsy miezaka ny mahatakatra, mahatsapa ny iray hafa. Ny fiaraha-miasa eo an-toerana sy ny fiaraha-miasa amin'ny fifandraisana toy izany dia tsy azo atao. Ireo karazana fifanakalozan-kevitra dia azo zaraina araka ny karazana fiantraikany: moana sy tsy azo ampiasaina.
Ny fifandraisana (verbal) (verbal) dia ahitana rafitra:
Ny fitaoman-teny (timbre, feo feo, teny maneho hevitra).
Famindrana, fifanakalozana vaovao, traikefa.
Fanehoan-kevitra amin'ny fampahalalana voaray (ny fanambarana ny fihetsika na fifandraisana, hevitra).
Ny fifandraisana tsy misy verbal (tsy-verbal) dia vokatry ny rafi-pifandraisana famantarana - amin'ny akaiky:
Pose nasehon'ny mpiara-miasa: fisokafan'ny fisokafana, fisintahana-tony.
Ny toerana eo amin'ny habakabaka dia ny fananganana faritany (mametraha antontan-taratasy, zavatra manodidina ny latabatra) na mampiasa faribolana kely.
Ny fanitsiana sy ny fampivoarana ny mpiara-miasa amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fihetsiky ny fihetsiketsehana, ny endriky ny vatana.
Fifandraisana sy fifandraisana
Ny fifandraisana toy ny fifandraisana dia misy fanabeazana, mandrindra, manombantombana ary mamela ny olona handamina ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny fanatratrarana ny tanjon'izy ireo. Ny fifandraisana dia mifandray akaiky amin'ny fifampiraharahana, dia iray amin'ireo singa fototra miaraka amin'ny fahitana (fahatsapana) ary miankina amin'ny rafitra mitovy (moana, tsy mivaingana) amin'ny dingan'ny fifandraisana. Fifanakalozana eo amin'ny fifandraisana sy ny fifandraisana:
Ny olon-tsotra iray dia tsy olom-bitsy ihany, fa koa ny haino aman-jery, misy rafi-famantarana famantarana (boky famantarana).
Ny tanjon'ny fifandraisana dia ny famindrana vaovao, raha tsy azo atao ny mandray ny valiny (fahatsapana, hevitry ny hafa)
Fifandraisana sy fanodikodinana
Ny fifandraisana eo amin'ny fifandraisana dia fifamatorana mifamatotra amin'ny fifandraisana. Vokatry ny fifandraisana misy eo amin'ny samy olona, ​​ny fiovana iray dia manatsara ny dikany. Matetika, amin'ny dingan'ny fifandraisana dia tsy afaka atao raha tsy misy manipulation. Ao amin'ny tontolo maoderina, ny teknika manipulative , ho fitaovana fitarihana, dia mahazatra amin'ny raharaham-barotra, ny tsenan'ny mpanjifa. Ny fanodinkodinana, mifanohitra amin'ny fanelanelanana dia manolotra:
fanaraha-maso miafina ny olona iray manohitra ny sitrapony (soso-kevitra, fitarihana ny tranzona);
manangana mpiara-miombon'antoka, mpiara-miombon'antoka amin'ny toerany miankina (milalao ny fahatsapana tahotra, ny fahatsapana ho meloka na ny faniriana)
ny fampiasana fandokafana sy fandokoana amin'ny teny.
Ahoana no hianaranao hiteny tsara?
Ny tanjona sy ny dikan'ny fiainan'ny olombelona
Ahoana ny fomba hampivelarana fihetseham-po?
Manontany tena ny fanontaniana mety?
Ahoana no hampijanonana ny tahotra?
Filozofia maoderina momba ny fiainana
Ny sakana amin'ny fiteny
Nahoana no mahasoa ny masomboly?
Fanesorana an-tsokosoko - Fomba 8 mahomby
Tena ilaina ny trano
Multivark miaraka amin'ny rafitra cooker
Ahoana ny famerenana ny kitapom-bolongana?
Natalia Andreichenko nanova tanteraka ny endriny
Tanakan ho an'ny ankizy
Macaroni miaraka amina hena - recipe
Miakanjo ho fampakaram-bady ho vahiny
Ny fanasitranana taolam-patin'ny tovovavy
Kitapo ambaratonga eo amin'ny sofa
Ny rheomatisma miavaka - soritr'aretina sy fitsaboana
Ahoana ny fomba fanaovana poti-tsaka ao an-trano?
Amin'ny inona no anaovana boots?
American Puppies American Staffordshire Terrier